Jonga & wenze | Tyelela uHultsfred
Bona kwaye wenze
ekhaya » Bona kwaye wenze
Zininzi izinto ezonwabisayo ekufuneka zenziwe kumasipala waseHultsfred kunye nezinto ezininzi zokuthatha inxaxheba. Ukutyelela kumyuziyam kunye nosapho? Okanye ukunyuka umkhondo wendlela entle? Nantoni na ofuna ukuyila, sinazo iingcebiso zakho!
Ngaphezulu kwesiqingatha sesigidi sezinto ezinxulumene nomculo othandwayo waseSweden. Apha uya kufumana ukurekhodwa, iipowusta, ukurekhodwa kwevidiyo, iincwadi, izinto ezinomdla- kunye nesinxibo sokuqala sikaKurt Olsson! Swedish
Ichibi lehlathi elinokuloba okuhle ebusika. I-jrsjön lichibi elincinci elinamawa amancinci elinamalungu amathathu amxinwa. Ingqongileyo inehlathi le-coniferous kunye nemiphetho
Ichibi elinekhaphethi enkulu.I-Färgsjön ngumzekelo olungileyo wendlela ichibi elincinci lamahlathi elinokuba yindawo yokuloba kwezemidlalo. Kwimeko yeFärgsjön
Idike enepikeperch yokuloba kwinqanaba. IHjortesjön imi kwintshona yeVirserum, kufutshane neVirserumssjön edityaniswe nayo. Eli chibi alinazondlo zininzi
KwiLönneberga, iHultsfredpaintball iququzelela imidlalo yabo balambele umsebenzi ogcwele i-adrenaline. I-Paintball ngumsebenzi omkhulu kuwe othanda i-adrenaline kwaye ulungile
Umfoti kunye nomzobi uEmma Jansson: Igama lam ndinguEmma Jansson. Ndihlala kwifama engaphandle kweHultsfred eSmåland neqabane lam kunye nelethu
UKayaking Yonwabela imimoya ezolileyo kunye nomzuzu othulileyo emanzini kwiHulingen entle. Ukutyibilika uthe cwaka phezu kwamanzi, yima elunxwemeni
ILinden lichibi elikhulu lehlathi elingenazondlo elinamanzi acacileyo kunye neziqithi ezincinci. Ihlathi le-Pine, i-porcupine, i-blueberries kunye ne-heather zongamela echibini. Idike linzulu
IStora Åkebosjön imi malunga neekhilomitha ezi-6 entshona yeHultsfred kwaye uyakuyifumana ukuba uqhuba ukusuka ku-34 udlula eHammarsebo usiya eStora Hammarsjön. Ichibi
ESilverdalen uya kuyifumana induli yomgodi wegrabile. Uphengululo
EPrästkragegärdet eVena, kukho induli efanelekileyo ekubalekeni kwesledled kunye nokubaleka kwekhephu.
Ebumelwaneni "Slätten" kumbindi Hultsfred uya kufumana iSlättenbacken, induli encinci kwaye ilungile. Kukho indawo yokutya kunye nokukhanyisa.
Indawo yokudlala yaseSilverdalen
Indawo yokudlala yaseSilverdalen -indawo yokudlala kunye nobubi! Izixhobo kunye nomtsalane Ukujika kweCombi kudlala indawo yeSandbox Barbecue Itafile yepikniki (ukufikeleleka okulungelelanisiweyo)
Indawo yokudlala kaMörlunda
Dlala ujikeleze indawo yokudlala kaMörlunda- kukho izinto ezinomdla onokuzifumanisa apha! Izixhobo kunye nezinto ezinomtsalane Isakhelo esinyukayo Umdlalo wokunyuka kwabantwana abancinci Ujinga
Umatshini othe ngqo
Uphahla lunyathela umoya kwiindlela ezincinci ezinendlela encinci. Ukuba ukhetha ukujikeleza umgama wonke, ungajonga phambili ukuya kwi-17 km ngokwahluka